Sivulelwe icala isikhulu soKlebe esimisiwe | IOL Isolezwe
Sivulelwe icala isikhulu soKlebe esimisiwe
Isolezwe / 12 February 2013, 10:26am / INTATHELI YESOLEZWE
ISIKHULU soKlebe esimisiwe, uMnuz McIntosh Polela, uvulelwe icala lokuzingela ngokungemthetho endaweni yangakubo. Icala livulwe ngabezeMvelo KZN Wildlife ngemuva kokucelwa ngabalimi ababambe uPolela nabantu abehamba nabo bephethe izinyamazane ezimbili ebezidutshuliwe.
ISIKHULU soKlebe esimisiwe uMnuz McIntosh Polela sibhekene necala lokuzingela ngokungemthetho, ukukhomba ngesibhamu nokubalekela ingalo yomthetho kulandela ukudubula impunzi ngesikhathi sizingela nabangani ngempelasonto.
UPolela uyavuma ukuthi uyidubulile impunzi kodwa wathi ubengazi ukuthi ukwenza lokho akukho emthethweni. Icala livulwe ngabeZemvelo KZN Wildlife esiteshini samaphoyisa iHimeville kulandela isikhalo esifakwe ngabalimi ngalolu daba.
UPolela nabantu abehamba nabo abane bamiswe ngabalimi ebusuku behamba ngemoto ebigcwele izibhamu zokuzingela nezinyamazane ebesezibulewe i-grey duiker ne-reedbuck.
UPolela wamiswa njengomkhulumeli woKlebe ngoNovemba nyakenye kulandela umbhalo awufaka kwi-twitter lapho ayebhuqa khona umculi we-kwaito owaboshwa ngecala lokubulala uMolemo “Jub Jub” Maarohanye ethi uma efika ejele kumele aphathe ujeke kavaselina ngoba angase awudinge.
Ngesikhathi iphephandaba elinguzakwabo weSolezwe iMercury limthinta ngocingo izolo uPolela ubuze intatheli ukuthi ifuna ukuthenga inyama yenyamazane yini.
Ebuzwa ukuthi unayo yini leyo nyama uthe ikhona impela ngoba kade eyozingela endaweni yangakubo ngakho akayiboni inkinga lapho.
Uthe usebenzise isibhamu i-308 esifakwe isithulisa msindo kanye nethoshi. “Ngihlale ngiyozingela. Yinto engiyithandayo. Uma uphuma ebusuku uyozingela ukhanyise ilambu elikhombisa lapho uzodubula khona lokho kubizwa ngokuthi wukuzingela ngelambu. Mina ngizingela emini nasebusuku,” kusho uPolela.
Uphikile ukuthi uyazi ukuthi i-reedbuck iyisilwane esivikelwe. Okhulumela amaphoyisa, uColonel Vincent Mdunge, uthe udaba lusaphenywa ngamaphoyisa aseMgungundlovu.